အွန်လိုင်းအခမဲ့ ကြော်ငြာကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲ ? – ADS Myanmar Blog
အွန်လိုင်းအခမဲ့ ကြော်ငြာကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲ ?
လူတော်တော်များများထင်နေကြတာက ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိမိအတွက် အသုံးမလိုတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ပြန်ရောင်းချင် တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြော်ငြာတော့မယ်ဆိုရင် အခကြေးငွေပေးရတယ်လို့ဘဲ ထင်နေကြပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အခကြေးငွေတစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မကုန်ဘဲ ကြော်ငြာချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက် အခမဲ့ကြော်ငြာကဏ္ဍက များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ…….
အခမဲ့ကြော်ငြာ ကဏ္ဍတွေကို များသောအားဖြင့် သတင်းစာ ၊ ဂျာနယ် ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတွေ့နိုင်ပြီး အခုနောက်ပိုင်းတော့ အွန်လိုင်းမှာပါတွင်ကျယ်လာပါတယ်…….
မိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖော်ပြကြော်ငြာပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်……..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ads.com.mm ဟာ မြန်မာ့နံပါတ် ၁ အခမဲ့ ကြော်ငြာ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ads.com.mm မှာ ကြော်ငြာခ၊ ကော်မရှင်ခတွေပေးစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမလိုတဲ့ ပစ္စည်း အသစ်တွေသာမက အဟောင်းတွေကိုပါ အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ပြီးရောင်းချနိုင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ websiteဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ တစ်စုတစ်စည်းထဲဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့် ရောင်းသူဝယ်သူတွေအတွက် အချိန် ကုန်သက်သာစေပါတယ်။ ၀ယ်သူတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် အချက်က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာရှာဖွေနိုင်ရုံသာမက ကိုယ်တတ်နိုင်မယ့် ဈေးနှုန်းကိုပါရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အားသာချက် တစ်ခုကတော့ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူ ဖုန်းဆက်ပြီး တိုကိရိုက်ဆက်သွယ်ကာ တွေ့ဆုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပွဲခပေးရတဲ့ စရိတ်လည်း သက်သာစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ads.com.mm ကနေတင့် မိမိတို့ ဆီမှာ ပိုနေတဲ့ ပစ္စည်း အသစ်အဟောင်းတွေကို အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ပြီး အခုပဲ အပိုဝင်ငွေရှာလိုက်ကြပါစို့……..
လူတောတြောမြွားမွားထငနြကှတောက ကိုယြ့ရဲ့စီးပှားရေးလုပငြနြးဘဲဖှစဖြှစြ ၊ မိမိအတှကြ အသုံးမလိုတဲ့ ပဈစညြးတစခြုခုကို ပှနရြောငြးခငြွ တာဘဲဖှစဖြှစြ ကှောငြှာတော့မယဆြိုရငြ အခကှေးငှပေေးရတယလြို့ဘဲ ထငနြကှပေါတယြ။
ကိုယြ့ရဲ့ ပဈစညြးတှကေို အခကှေးငှတစေပြှားတစခြပွမြွှ မကုနဘြဲ ကှောငြှာခငွတြယဆြိုရငမြိတဆြှတေို့အတှကြ အခမဲ့ကှောငြှာကဏျဍက မွားစှာ အထောကအြကူဖှစစြမှောပါ…….
အခမဲ့ကှောငြှာ ကဏျဍတှကေို မွားသောအားဖှငြ့ သတငြးစာ ၊ ဂွာနယြ ၊ မဂျဂဇငြးတှမှောတှနေို့ငပြှီး အခုနောကပြိုငြးတော့ အှနလြိုငြးမှာပါတှငကြယွလြာပါတယြ…….
မိမိတို့ရဲ့ကုနပြဈစညြးတှကေို တစစြုတစစြညြးထဲ ဖောပြှကှောငြှာပေးတဲ့နရောတစခြုဘဲဖှစပြါတယြ……..
မှနမြာနိုငငြံမှာ ads.com.mm ဟာ မှနမြာ့နံပါတြ ၁ အခမဲ့ ကှောငြှာ website တစခြုဖှစပြါတယြ။ ads.com.mm မှာ ကှောငြှာခ၊ ကောမြရှငခြတှပေေးစရာမလိုဘဲ ကိုယြ့အတှကြ အသုံးမလိုတဲ့ ပဈစညြး အသစတြှသေောမက အဟောငြးတှကေိုပါ အခမဲ့ကှောငြှာတငပြှီးရောငြးခနွိုငတြဲ့ website တစခြုဖှစပြါတယြ။
ဒီ websiteဟာ ကုနပြဈစညြးတှကေို သူ့ကဏျဍနဲ့သူ တစစြုတစစြညြးထဲဖောပြှပေးထားတာဖှစတြာကှောငြ့ ရောငြးသူဝယသြူတှအတှေကြ အခွိနြ ကုနသြကသြာစပေါတယြ။ ဝယသြူတှအတှေကစြိတခြမြွးသာစမယြေ့ အခကွကြ ကိုယလြိုခငွတြဲ့ပဈစညြးကို အမွိုးအစားစုံလငစြှာရှာဖှနေိုငရြုံသာမက ကိုယတြတနြိုငမြယြ့ စွေးနှုနြးကိုပါရှေးခယြွ ဝယယြူနိုငပြါတယြ။ နောကထြပြ အားသာခကြွ တစခြုကတော့ ရောငြးသူနဲ့ ဝယသြူ ဖုနြးဆကပြှီး တိုကိရိုကဆြကသြှယကြာ တှဆေုံ့ရတာဖှစတြဲ့အတှကြ ပှဲခပေးရတဲ့ စရိတလြညြး သကသြာစပေါတယြ။
ဒါကှောငြ့ ads.com.mm ကနတငြေ့ မိမိတို့ ဆီမှာ ပိုနတေဲ့ ပဈစညြး အသစအြဟောငြးတှကေို အခမဲ့ကှောငြှာတငပြှီး အခုပဲ အပိုဝငငြှရှောလိုကကြှပါစို့……..
Author hsulattPosted on January 18, 2016 January 18, 2016 Categories Ads.com.mm, OtherTags အွန်လိုင်းအခမဲ့ ကြော်ငြာကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲ???????
Previous Previous post: ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေအတွက်လဲ ရှာဖွေစရာတွေစုံလင်တဲ့နေရာ….
Next Next post: ဂီတနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ်…..